စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုအား CNH Industrial Services Ltd. နှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ Csepel Holdings Plc. တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံ | Myanmar Industry Portal
» စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုအား CNH Industrial Services Ltd. နှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ Csepel Holdings Plc. တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံ
CNH Industrial Services Ltd. နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် CNH Industrial Services Ltd. နှင့် Convenience Prosperity Co., Ltd. (A Division of Yoma Strategic Holdings) တို့ ပူးပေါင်း၍ သာဂရရှိ အကြီးစား စက်ရုံများတွင် လယ်ယာသုံးစက်ယန္တရား New Holland Tractor Model (၃)မျိုးအား တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး၊ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုမည့် စက်ရုံဝန်ထမ်းများအား အရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရေး၊ ထိုမှတစ်ဆင့် Localized Parts များအသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသွားနိုင်ရေး၊ စီမံကိန်း အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် AoD ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာကဏ္ဍတွင် အောင်မြင်စွာ သုံးစွဲလျက်ရှိသော New Holland ထွန်စက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
အလားတူပင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လျှပ်စစ် ဘတ်(စ်)ကားများ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်ပဈေးကွက်သို့ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်နှင့် ပြည်တွင်း၌လည်း အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှ Csepel Holdings Plc. နှင့် တွေ့ဆုံ၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း ပြီး Electric Vehicle ( EV) Bus များ၊ Truck ကားများနှင့် ဆက်စပ်နည်းပညာမြင့် Machine Tool များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် မြို့ပြနှင့်ကျေးလက် များရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများတွင် လွယ်လင့်တကူ သယ်ယူရွှေ့ပြောင်း အသုံးပြုနိုင်မည့် ဓါတ်ငွေ့သုံး Micro Turbine များ ထုတ်လုပ်လိုမှု စသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်နိုင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေး‌နွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများသို့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။